Indlela yokubophezela i sweatshi elishisayo kunye neenaliti zokudibanisa, iklasi yeklasi, icebo. Ijezi elihlekazi elingu-female elithintela iinaliti, ifoto, ividiyo
Ukudibanisa i sweatshi elineshushu kunye neenaliti zokudibanisa akunzima, into eyona nto kukufumana zonke izinto eziyimfuneko zokudibanisa kwaye unomnqweno omkhulu wokuzikholisa wena okanye izihlobo zakho ngezinto ezintsha. Ukukhangela kwemveliso yethu sasebenzisa intambo yemibala emibili: i-beige ne-brown, zombini iintlobo zetambo kunye ne-lurex. Umbala ogqithiseleyo u-beige, umbala ophezulu ubonakala bubuso. Iibhokhwe, izitya kwiimikhono, i-neckline yenziwe ngombala obomvu kunye ne-band elastic 1 x 1. Lo mfanekiso wenziwa ngombala obomvu, ngaphambili.
Intambo: I-Alize i-sal I-acrylic ye-95%, i-5% ye-metallic, i-100 g / 460 m, umbala we-beige, Ukusetyenziswa kwe-600 g
Intambo Yenza Intsimbi igolide ye-92% ye-acrylic, i-8% i-Polyester yensimbi, i-100 g / 400 m, ibomvu. Ukusetyenziswa kwintambo 50 g
Ubuninzi bebhebhoni ububanzi buka 2.5 cm, ubude bu-1 m
Izixhobo: Inaliti yeNombolo 2, Inaliti No. 3, inaliti ye-embroidery
Ubunzima be-knitting elastic: 1 cm. Ii-loops ezingama-24, ii-4
Ubungakanani befayili 46 - 48
Le swepha yintsusa, ihamba phambi komfanekiso we-ballerina, iboshwe kwipatheni ye-monochrome embroidery.
Nangona i-sweater isondle kakhulu, ingaba yinyani, iyashushu. Ngemuva wakhe uhlotshiswe ngebhedi ye-satin yombala obomvu.
Indlela yokubopha i sweatshi yabasetyhini ngeenaliti ezinamaqhina-isinyathelo ngeemfundiso zesinyathelo
Umzekelo wempuphu ezayo
Xa udibanisa iinaliti zamanqanaba amancinci ukuba uthayiphe izinto eziyi-126 zentambo yombala obomvu. Ziyazi iindidi ezili-15 zebhanki ye-rubber 1 x 1, i.e. 1 abantu., 1 umz.
Emva koko, siphendukela kwezithethi zogqitha obukhulu kwaye siqhubeke sidibanisa kumgangatho ongaphambili (imigqa yangaphambili yimilo yangaphambili, i-purl loops yi-loops ye-purl).
Xa sele ixhunyiwe, ngale ndlela, imigqa engu-123, siqala ukwenza i-armhole yomkhono we-raglan. Ukwenza oku, kumacala omabini emveliso, ixesha eli-1 ixesha eli-4, kunye nomgca ngamnye wesibini amaxesha angama-30 1 iphe.
Ukuhlobisa umgca ophakathi, uvale i-loops ephakathi, uhlula i-knitting kwi-2 parts, ngamnye udibaniswe ngokwahlukileyo, ngelixa uvale amaxesha angama-4 u-loop kumqolo ngamnye wesibini.
Sadibana phambi komva. Xa sele idibene nemigca eyi-18 ngombala we-beige, siqala ukudibanisa ngokwecwangciso. Ukuze kungabikho imingxuma ekubambeni, xa ushintsha ukusuka komnye umbala ukuya komnye, intambo iwela ngapha.
Umqolo ngamnye kumzobo ulingana nomgca kwimveliso. Ukusuka kwicala elingalunganga, unganqumla iintambo, ngelixa umgama phakathi kweentyantyambo ezincinci, xa umgama uqala ukwandisa, kungcono ukusebenzisa ii-coil zombini ngentambo emacaleni ahlukeneyo ombala obomvu.
Ukunciphisa kwenzelwe kokubili ngasemva. Ekuphakameni kokubamba ngokulinganayo nobude bomva, iinqununu zivaliwe.
Kwizithethi zincinci elincinci, ukudayela ama-loops angama-52, udibaniswe ne-band elastic 1 x 1, kwaye ngoko-11 imigqa. Yiya komnye umbala kwaye udibanise inaliti inombolo 3.5, udibaniswe ngobuso obuhle.
Ukususela ekuqalekeni kwenqwelwana ephezulu kwinqwelwe yokunyuselwa kwekhono, iingubo ezingama-44 kufuneka zongezwe kwi-136 imigqa. Ngenxa yoko, ii-loops ezingama-96 kufuneka zifake phambi koyilo lwe-armhole kwizithethi.
Phantse yonke imiqolo engama-6, yongeza 1 iphe.
Ukuhlobisa i-raglan kwicala ngalinye, ukuvala iingubo ezi-4 kwaye emva kwimizuzu nganye yesibini ukuvala i-loop 1 kwicala ngalinye.
Ukusebenzisa inaliti yokugcoba, usebenzisa intambo ye-beige, yenza i-side seams uze ubonce imikhono.
Unokwenza unqumle ngasemva ngoncedo lwe-hook "isinyathelo sokuhamba" (RLS idibene ukusuka kwesobunxele kuya kwesokudla)
Kwi-Nombolo ye-2 kunye noncedo lomnxeba obomvu olongezelelweyo esiwufake ngaphaya komda we-loop.
Sadibanisa imigqa eyi-12 kunye ne-band elastic 1 x 1. Sivala iipopu. Itheyipu iyanqunyulwa kwiindawo ezi-2, iingqungquthela zitywinwe ngoncedo lwe-cigarette lighter.
Sithunga ukusuka kwicala elingalunganga ukuya kwibhanti e-elastic.
Ukunika i sweta ukujonga okugqityiweyo kufuneka kuhlulwe.
Nantsi i sweatshi lethu elihle labesetyhini ngomzekelo olungele!
Ikhonkethi yeTunisi yamaQala
Izikhonkwane ze-crochet ezixutywe ngeboya ngezandla zabo
Iiglavu zamadoda ase-Summer ngaphandle kweminwe
Andifuni - andiyi kuthi: indlela yokondla umntwana ngokutya "okulungileyo"
Isityalo esingaphandle saseDracaena
U-Buzova wavuma ukuba wayenalo nyaka wobudlelwane obusondeleyo nomntu
Iinqebengwane ngamantambo ama-macadamia kunye nesiraphu
Isiraphu ye Raspberry
Iphupha lamaphupha amaphupho amaphupha aphuphayo yintoni iphupha
Ukushisa okusemgangathweni ngaphambi kokuya esikhathini kuyindlela efanelekileyo yokuxilonga